Exynos mureza chipsets: Nhoroondo yeSamsoni yemumba silicon
Dzokera kumenu yechipiri
Enda kumucheto wekutanga
July 11, 2021 by Martin6
Credit: Samsung Exynos
Samsung ndeimwe yemakambani mashoma e-smartphone ane kugona kugadzira ayo ekumusoro-magumo machipisi, pamwe neApple neHuawei (kusvika iyo US kutengeserana kurambidzwa ndakabvisa izvo mubhu). Iyo Korean firm's Exynos mureza wevagadziri anga ari mafonifoni ayo ekumusoro-kumagumo mafoni kwemakore ikozvino, achifukidza iyo Galaxy S akateedzana uye Galaxy Note akateedzana.
Asi nyaya iyi yakatangira papi chaipo? Joinha isu patinotarisa nhoroondo yeSamsung Exynos flagship processor, kubva kumafoni ekutanga nesilicon iyi kusvika kuma superphones anhasi.
Related: Zvese zvaunoda kuti uzive nezve Samsung's Exynos processor
2010: Kana mureza chipset aireva Hummingbird
Yedu yekudonha muSamsung Exynos nhoroondo inotanga neyekutanga Samsung S smartphone, yakatangwa muna 2010, uye yaigoneswa neye-mumba chipset kubva pakuenda. Ichi chaisava kutanga kweExynos hazvo, sezvo chipset yainyatso kunzi Hummingbird. Iwe murume, handingafarire kudzoka kune anonwisa mazita eshiri senge sunbird uye goldfinch.
Zvisinei, iyo 45nm Hummingbird yakadzoreredzwa zita reiyo Exynos 3 Imwe, uye yaive yakanaka chipset yenguva yacho. Samsung's in-house processor yakarova 1GHz imwechete-musimboti Cortex-A8 CPU panguva iyo 1GHz nhepfenyuro maCPU aive mashoma. Muchokwadi, iyo inogadzira yakati yaive indasitiri yekutanga 1GHz processor panguva yekuburitswa kwayo muna2009.
Iyo Hummingbird chipset yakaunzawo PowerVR SGX540 GPU, rutsigiro rwe800 x 600 kuratidza (kwete zvinoshamisira apo Apple yanga yave kuda kuvhura iyo 960 x 640 iPhone 4), uye rutsigiro rwekurekodha 1080p (ichirova iyo iPhone 4's 720p kuburitsa). Zvimwe zvinhu zvakaita seLPDDR2 RAM uye eMMC 4.3 rutsigiro zvaive zveiyo kosi panguva iyoyo.
Zvinonakidzawo kuziva kuti iyi ndiyo yega Samsung chipset yekutsvagisa Nexus kana Pixel chishandiso, ichishandiswa muNexus S. Mamwe madhiragi eNexus nePixel akashandisa Qualcomm Snapdragon silicon, kunze kwa2011 Samsung Galaxy Nexus (ichishandisa TI OMAP silicon).
Nhare dzinozivikanwa: Samsung Galaxy S, Google Nexus ACHANGE
2011: Yekutanga yakakodzera Exynos mureza weSoC
Yekutanga Samsung Exynos mureza chipset munhoroondo (kureva. .Kusina zita retroactive shanduko) yaive Exynos 4210 Dual, inotangira mukati megore ra2011 reGalaxy S2. Uye chaive chikamu cheyekutanga mafungu maviri-epakati smartphone processor, achiendesa 1.2GHz Cortex-A9 CPU.
Chimwe chinozivikanwa Exynos 4210 Dual ficha yaive yaimbove-ubiquitous Mali-400MP4 GPU, yaive nguva yekutanga kuona Arm GPUs mukati meiyo Samsung Galaxy S akateedzera mureza. Iyi ndiyo tsika inoenderera nanhasi, kunyangwe ichitaridzika senge shanduko iri afoot nokuti 2022.
Iyo SoC ine mashoma maficha akafanana neakafanotangira hazvo, senge 45nm yekugadzira maitiro, LPDDR2 RAM rutsigiro, uye 1080p / 30fps kurekodha vhidhiyo. Isu hatisi zvakadaro tinoona rutsigiro rweakakwira resolution resolution (1,440 x 900) uye eMMC 4.4 rutsigiro. Chimwe chinhu chisingazivikanwe chakanyorwa ndeye rutsigiro rwe5MP kamera, asi iyo chip yaive mukati memafoni ane 8MP kumashure kamera.
Iyo Exynos 4210 Dual yakawanawo nzira yayo kupinda yekutanga Galaxy Note kumashure mu2011 (yakaonekwa pamusoro), ichimisikidza foni-yakakura saizi panguva iyo makuru masikirini aive asina kujairika zvachose. Uyezve, iyi chipset yakapa runhare rwekutanga rwaMeizu (iyo Meizu MX). ChiChinese brand yaizoenderera ichishandisa Exynos mureza weSoCs mune zvakawanda zvigadzirwa zvayo.
Nhare dzinozivikanwa: Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Note, Meizu MX
2012: Iyo indasitiri inoenda kune quad-core
2012 huru muhomwe yesilicon nhabvu yaive yekuchinja kuenda kuquad-core CPUs, uye Samsung yaive chikamu cheichi chiitiko nekupa iyo Exynos 4412. Chipset nyowani yakatanga mukati meGlass S3 asi zvakare yakaonekwa muGreen Note 2 muchikamu chechipiri che gore, kunyangwe iine zvishoma CPU wachi yekumhanyisa inowedzera.
Kutaura nezveCUU, takawana quad-core Cortex-A9 CPU iyo yakapeta zvakapetwa nhamba yemakoresi akaonekwa mune yapfuura gore rekumusoro SoC. Iyo ichiri yakavakirwa paiyo imwechete Cortex-A9 CPU, asi iyo quad-core kurongeka yakatambirwa nekuda kweApple uye akasiyana-echitatu-bato maapplication achigamuchira akawanda-epakati rutsigiro.
Nharembozha vatambi vangadai vakaodzwa mwoyo zvishoma mu2012, sezvo Exynos 4412 yakashandisa imwechete Mali-400MP4 GPU yakaonekwa mune rapfuura Exynos processor. Iyo zvakare yakabuda iine imwecheteyo yekutanga eMMC rutsigiro uye 1080p / 30fps kugona kugona. Zvikasadaro, iyo Exynos 4412 yakapa 32nm dhizaini yaive yekuvandudza kwakasimba pabepa, pamwe ne1,440 x 900 kuratidza resolution.
Zvinoshamisa kuti, processor iyi yakawanawo nzira yayo kupinda mumafoni maviri eLenovo kumashure muzuva pamwe neyekutanga-chizvarwa Galaxy Note 8.0 piritsi.
Nhare dzinozivikanwa: Lenovo K860 / K860i, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S3
2013: Iwe waifunga kuti vanomira paquad-core?
Iyo yeindasitiri indasitiri inokurumidza kufamba ichibva kune imwechete-musimboti maCPU kuenda kune maviri-epakati uyezve quad-core processor mukati memakore mashoma. Asi 2013 yakaratidza kekutanga Samsung inotora octa-core processor mune yayo epamusoro-magumo mafoni. Iyo 28nm Exynos 5410 yakatanga mukati meGPS S4 uye yakaendesa zvaitaridzika kunge hombe. Izvi zvaireva sumbu remana-akakwenenzverwa-ane simba Cortex-A15 CPU cores uye sumbu rechina risingaremi Cortex-A7 cores. Asi paive nenyaya yakakosha neiyi SoC.
Iyo Exynos 5410 yaive ne kukamurwa kukuru mune rimwe chete sumbu raigona kushanda panguva. Izvi zvaireva kuti iwe haugone kuve ese masere CPU cores anoshanda kamwechete, uye haugone kuve neCortex-A7 neCortex-A15 inoshanda panguva imwe chete. Saka iwe unogona kunge uine mana Cortex-A7 macres anomhanya or iyo ina Cortex-A15 cores inoshanda. Icho chaive chisarudzo chisina kujairika uye mhando yekukunda chinangwa chekuenda octa-core pakutanga.
Izvo zvaive zvisina kushata zvese hazvo, sezvo isu takawana beefy PowerVR SGX544 MP3 GPU, inoratidza zvisarudzo kusvika ku2,560 x 1,600, uye LPDDR3 rutsigiro. Iyo chipset yaive yakanaka inokwanisa mumunda wekhamera zvakare, ichipa 1080p / 60fps kurekodha vhidhiyo, uye kamera yekumashure inosvika 13MP.
Iyo Exynos 5410 yaive imwe inopokana chipset, uye yaisazove yekupedzisira Exynos silicon kukakavara kupokana.
Nekutenda, Samsung yakaburitsa iyo Exynos 5420 mukupera kwegore ra2013, uye yakapa imwe inonzwisisika kutora octa-core dhizaini. Iyo yakakwidziridzwa processor zvirokwazvo yakabvumidza kune ese ari maviri madiki uye makuru macores kuti ave anoshanda panguva imwe chete. Ichi chipset chakachinjisawo PowerVR GPU yeMali T628 MP6 GPU, Samsung ichiti Mali GPU "yakawedzeredzwa" pamusoro pechikamu chePowerVR semhedzisiro. Izvo zvaive zvimwe zvakafanana neiyo Exynos 5410.
Imwe inonakidza tidbit pano ndeyekuti iyo Snapdragon vhezheni yeGlass Note 3 yakapa 4K / 30fps kurekodha, asi iyo Exynos vhezheni yakabuda pa1080p / 60fps. Aya mamiriro aizoshandurwa mumakore anotevera. Iyo Exynos musiyano zvakare inonzi yakashaiwa rutsigiro rweLTE, kubuda pa 42.2Mbps HSPA + pachinzvimbo.
Nhare dzinozivikanwa: Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Cherechedzo 3
2014: Exynos inorova Qualcomm kusvika makumi matanhatu neshanu
2014 raive gore rakanakira Samsung, sezvo iyo femu yakaburitsa izvo zvingangodaro kuve imwe yemafoni ayo akanakisa akambova muGalaxy S5. Asi foni iyi yaingogoneswa neiyo Snapdragon 801. Neraki, Samsung yakaparura iyo Galaxy Note 4 uye Galaxy Note Edge gare gare gore iro, iro raipa Exynos silicon zvechokwadi.
Iyo 20nm Exynos 5433 yaive mureza Samsung processor ye2014, uye yakanyatsorova Qualcomm kune iyo 64-bit post. Ehe, iyo chipset nyowani yaive neocta-core CPU yaive neArm yekutanga 64-bit CPU cores. Izvi zvinoreva kuti isu takawana ina Cortex-A57 cores yemabasa akaomarara uye ina Cortex-A53 cores yemabasa mashoma epamberi.
Ichi chipset chakapawo Arm's Mali-T760 MP6 GPU, LPDDR3e RAM rutsigiro, uye iyo yakafanana kuratidza resolution seprojekita yegore rapfuura. Kuita kwekamera kwakatora danho kumusoro, sezvo Exynos 5433 yakatsigira 3.7MP selfie kamera, imwe chete 16MP kumashure kamera, uye 4K vhidhiyo, pamwe ne120fps vhidhiyo pa1080p. Iyi yekupedzisira ficha (kana 240fps) ikozvino chinyowani kune mazhinji maApple mafoni.
Iyo selfie kamera resolution inonzwika yakaderera zvakanyanya mhando, asi chokwadi ndechekuti hapana imwe yefoni yeScellship inotsigira chero chinhu chiri padyo ne5MP panguva iyoyo. Isu tinofanirwa kumirira gore kuti tiwedzere kutsigirwa mune izvi.
Samsung's 2014 chipset yakaunzawo LTE kubatana, kuendesa 300Mbps kurodha kumhanya nekutenda kuCat 6 downlink rutsigiro. Rutsigiro urwu rwakabatsira kudzikisira mukana wekubatanidza pakati peiyo Qualcomm neExynos misiyano.
Nhare dzinozivikanwa: Samsung Galaxy Cherekedza 4, Samsung Galaxy Note Edge
2015: Iyo yakanakisa mureza processor yegore
Iyi ndiyo yepamusoro peiyo Samsung's Exynos chirongwa? Zvakanaka, zvinonetsa kupokana neimwe nzira, sezvo iyo 14nm Exynos 7420 ingangodaro yaive inokwanisa kwazvo mureza weiyo Android 2015. Yakanga isiri yekutanga 64-bit Android processor kana kunyangwe yekutanga 64-bit Exynos chipset, asi zvakadaro for a great bit of silicon compared to Qualcomm, MediaTek, and Huawei's zvipo panguva iyoyo. Isu taizoenda kusvika toti yaive yakanakisa Samsung Exynos chipset munhoroondo panguva yekusunungurwa kwayo.
Iyo Exynos 7420 yakachengetedza imwechete octa-core CPU seyakatangira, iine ina Cortex-A57 cores uye ina Cortex-A53 cores. Isu takawanawo imwechete Mali-T760 GPU, kunyangwe aine mamwe maviri cores (MP8) yekuwedzera graphical. Asi chipset yakaunza diki, 14nm dhizaini, 4K kuratidza resolution (4,096 x 2,160, 3,840 x 2,400), LPDDR4 RAM rutsigiro, uye rutsigiro rweUFS 2.0 yekuchengetedza.
Zvimwe zvinozivikanwa zvirevo zvinosanganisira tsigiro ye20MP imwechete kamera yekumashure, iyo 8MP selfie kamera, uye 4K / 30fps vhidhiyo yekurekodha neHEVC.
Iyi processor inogonesa chete iyo Galaxy S6 yakateedzana uye iyo Galaxy Note 5. Mishumo panguva iyoyo akadaro kuti Samsung yakabviswa paSnapdragon 810 nekuda kwekunetsa kudziya.
Nhare dzinozivikanwa: Meizu Pro 5, Samsung Galaxy Cherechedzo 5, Samsung Galaxy S6 akateedzana
2016: Exynos inowana tsika CPU
Samsung yanga ichivimba neArm CPUs kune ese ayo Exynos processors kusvika pano. Asi 2016's Exynos 8890 yakaratidza shanduko huru, sezvo yaishandisa chizvarwa chekutanga cheSamsung Mongoose CPU. Kunyanya zvakanyanya, isu tanga tine mana Mongoose M1 macores akabatanidzwa neana Arm Cortex-A53 cores.
Iyi 14nm processor yakaratidzawo Mali-T880 MP12 GPU, 4K resolution resolution, uye LPDDR4 RAM rutsigiro. Isu takawanawo mbiri-kamera rutsigiro kekutanga, kubuda pa12MP + 12MP (kana imwe chete 24MP main kamera), pamwe neiyo selfie kamera inosvika 13MP.
Iyo Exynos 8890 yakaunzawo rutsigiro rwe4K / 60fps kurekodha, asi zvinosuwisa, Exynos-inofambiswa Galaxy S7 zvishandiso haina kuwana chimiro ichi. Izvi zvinodaro nekuti iyo Snapdragon 835, iyo yaipa mamwe maGreen S7 akasiyana, yanga isina rutsigiro rwekurekhodha kwe4K / 60fps. Saka zvinomira kufunga kuti Samsung inogona kunge yaida kuchengetedza hunyanzvi.
Yedu Gary Sims yakatarwa 2016's flagship Android mapurosesa ndokuona kuti Exynos 8890 yaive yechipiri padyo neKirin 960 maererano neCPU mashandiro asi yakadonha kumashure kwese maSpapdragon neHuawei machipisi pakasvika kuita kweGPU. Izvo zvinoda zve GSMArena akaudzawo kuti Exynos Galaxy S7 yaive nesimba-rinoshanda kupfuura iyo Snapdragon musiyano.
Nhare dzinozivikanwa: Meizu Pro 6 Uyezve, Samsung Galaxy Note 7, Samsung Galaxy S7 dzakateedzana
2017: Kukwira kweakakomba compute
Iyo Exynos 8895 yaive Samsung's flagship processor ye2017, uye iyo diki nhamba tweak yakaratidza shanduko diki diki. Iyo processor nyowani yekambani yakavakwa pane 10nm maitiro, ichiendesa inoshamisa nzvimbo uye simba rekuchengetedza pabepa. Yakashandisawo octa-core CPU dhizaini ine ina Mongoose M2 cores uye ina Cortex-A53 cores, inonamira neyakajairika macores eiyo inorema CPU musimboti.
Samsung yakakwidziridza iyo ante mubazi reGPU, ichisarudza Mali-G71 MP20 mifananidzo. Rival brand brand Huawei yaizoshandisa iyo imwechete GPU, asi yakasarudza masere shader cores panzvimbo ye20, uye mutsauko uyu wakaratidza mukuyera kwekuyera.
Zvimwe zvinozivikanwa Exynos 8895 maficha aisanganisira 4K kuratidza resolution, Gigabit LTE yekubatanidza, UFS 2.1 yekuchengetedza kuenderana, uye LPDDR4X RAM rutsigiro. Samsung yakatangawo izvo zvinonzi "chiratidzo chekugadzirisa unit" kana VPU pano, inoitisa mabasa emakomputa ekuona senge chiitiko uye kuziva chinhu. Izvi zvaizomaka yekutanga foray hombe yemhando mumuchina kudzidza silicon.
Iyo chipset yaive zvakare yakarongedzwa kumakomba ari pamberi pekamera, ichiendesa mbiri ISP dhizaini neiyo imwe musimboti iri kushandiswa kune inorema yekufungidzira mabasa uye imwe yacho ichishandiswa kune mashoma mabasa akaomarara. Iwe zvakare une 4K / 120fps yekurekodha kugona, inosvika kune imwe chete 28MP kamera kana 16MP + 16MP mbiri kamera rutsigiro, uye inosvika kune 28MP kamera ye selfies.
Iwo mapurosesa ebetsero maficha haamire pano, sezvo aipa yakatsaurwa kuchengetedzeka mabits ekubata biometric kuvimbiswa (semuenzaniso zvigunwe zvemunwe, iris), flash memory kuchengetedza, uye zvimwe zvekuchengetedza nyaya.
Zvakawanda segore rapfuura, hatina kuona 4K / 60fps kana 4K / 120fps kurekodha vhidhiyo zviri pamutemo kuuya kumafoni neichi chipset. Asi isu takaona zvisina kufanira mashandiro ekugonesa iyo yekutanga mhando sarudzo pane zvishandiso zveSamsung.
Nhare dzinozivikanwa: Meizu 15 Plus, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Cherechedzo 8
2018: Evhangeri, kwete shanduko
Zvainzwa senge 2018's Exynos 9810 yaive yakawanda yekusimudzira iterative pamusoro peExpynos 8895 pane mutambo-unoshandura shanduko. Asi isu takanyatsoona maviri akakwirisa ekuvandudzwa muCPU neGPU zvikamu.
Muchiitiko cheiyo CPU, takaona Samsung ichichengetedza maviri-masango octa-musimboti dhizaini asi iine ese-matsva CPU macores. Ino nguva, isu tanga tine yechina-chizvarwa chechitatu Mongoose CPU macores akabatanidzwa neana Cortex-A55 cores. Uye iwo maA55 cores anogara muSamsyn's Exynos mureza wepurosesa kubva muna 2021.
Kuenda kune yakajeka mifananidzo yezvinhu, iyo femu yakachinjira kuArm's Mali-G72 MP18 GPU. Zvakare, Samsung yakasarudza kurongedza yakanyanya kuwanda shader macores kupfuura anokwikwidza brand Huawei's Kirin 970 SoC (Mali-G72 MP12).
Zvikasadaro, iyo chipset yakanga ichiri kuvakwa pane 10nm maitiro, uye ichiri kutsigirwa maficha senge LPDDR4X RAM, UFS 2.1, 4K kuratidza resolution, uye 4K / 120fps kurekodha. Isu hatina kuona bump kune 1.2Gbps maseru ekumhanya kuburikidza neLTE uye 16MP + 16MP mbiri kamera (pamwe ne24MP imwechete kamera).
Iyi ingangove yekupedzisira mureza Exynos processor inoshandiswa nediki Chinese mhando Meizu. Taona Vivo mbundira Exynos silicon yemafoni ayo echiChinese mumakore achangopfuura, asi izvi zvinongorambidzwa kusvika pakati-renji silicon.
Nhare dzinozivikanwa: Meizu 15 Plus, Samsung Galaxy Cherechedzo 9, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 10 Lite
2019: Chirongwa chenguva yemberi Samsung silicon
Samsung's Exynos 9820 yakagadzira akati wandei maitiro ayo iyo femu iri kuramba ichimbundira muma chipsets ayo nhasi. Kutanga, takaona MediaTek-inofuridzirwa ichienda kune-tri-cluster CPU, iine maviri anorema-anosimudza Mongoose M4 CPU cores, maviri maCortex-A75 macres epakati-chikamu mabasa, uye ina Cortex-A55 cores yezviremera zviitiko.
Mugadziri weKorea akaunzawo neural processing unit (NPU) kekutanga, zvichitevera matanho aHuawei. Muchokwadi, Samsung yaizoti iyo Exynos 9820's NPU inogona kupedzisa mabasa emuchina kusvika kanomwe nekukurumidza kupfuura Exynos 9810 yegore rapfuura.
Samsung yakapawo Mali-G76 MP12 GPU, ichitora 40% yekuvandudza pamusoro peiyo Exynos 9810 kana 35% kugona kwekuita. Saka zvairevei kuti CPU neGPU kuvandudza kwaireva pakurwisa Qualcomm's Snapdragon silicon?
zvakanaka, kuedza kwedu pachedu yakaratidza kuti Exynos 9820 yakarova iyo Snapdragon 855 kana zvasvika kune imwechete-musimboti CPU mashandiro, nekuda kweavo beefy tsika CPU cores. Asi iyo yaive yakajeka nzvimbo yega inopenya yeSamsung, sezvo iyo Snapdragon silicon yakaunza zvirinani graphical performance, kushoma kupisa, uye hupenyu huri nani hwebhatiri.
Iyo Exynos 982x dzakateedzana dzakasaririra kumashure kweshamwari yayo yeSnapdragon munzira dzinoverengeka, asi zvakadaro yakaisa template yekuyedza mune ramangwana.
Zvakadaro, iyo Exynos 9820 yaive nezvakawanda zvekupa. Isu takawanawo 8nm dhizaini, yakavandudzwa Hardware chengetedzo, 2Gbps maseru ezasi ekumhanyisa kumhanya kuburikidza ne4G, rutsigiro rweUFS 3.0 yekuchengetedza uye LPDDR4X RAM, uye 4K kuratidza resolution.
Zvichida chinonyanya kunakidza ndeye 8K / 30fps kurekodha vhidhiyo, asi hapana kana imwe yeExynos-inogoneswa nhare yakatangwa gore rino yakapa iyi sarudzo. Zvekare, isu tiri kufungidzira Samsung kukakavara kwehunhu parity pano, sezvo iyo Snapdragon 855 chipset yakashaiwa iyi sarudzo.
Iyo Exynos 9820 yakashandawo kumusoro kweIPP inokwanisa kutsigira anosvika mashanu macamera sensors, 22MP main kamera (uye 22MP kumberi) kana maviri 16MP vapfura, uye 4K / 120fps vhidhiyo zvakare. Rutsigiro rwe22MP runoratidzika kunge rwunopokana muchiedza cherutsigiro rwekurekodha kwe8K, iyo inowanzoda 33MP + sensor.
Samsung yakaburitsawo Exynos 9825 gare gare mu2019, uye yaishandiswa mune yeGreen Note 10 akateedzana. Nehurombo, Yedu Yekumhanyisa Bvunzo G mhedzisiro yakaratidza kuti chipset nyowani yeSamsung ichiri kumashure kweQualcomm's Snapdragon 855 chipset, kunyanya kana zvasvika pakuita graphical.
Nhare dzinozivikanwa: Samsung Galaxy S10 yakateedzana, Samsung Galaxy Cherechedzo 10 nhevedzano
2020: Iyo yakaderera poindi yeSamsung Exynos
Zvichida chimwe chezviratidzo zvikuru kuti Exynos 990 yainge yakundikana Samsung yaive yekuti chipset haina kunyatso shandiswa muKorea Galaxy S20 nharembozha. Mushure mezvose, Samsung yakagara ichishandisa Exynos simba kune mireza mumusika wayo wemba.
Iyo Exynos 990 yaive yakanaka yakanaka mureza SoC pabepa, iine 7nm dhizaini uye tri-cluster CPU. Iyo processor yakapa maviri Mongoose M5 cores emabasa anorema, maviri maCortex-A76 macres epakati-chikamu mabasa, uye ina Cortex-A55 cores yezviitiko zvishoma zvinoda. Iyi ingangove yekupedzisira Exynos mureza mushandirapamwe neSamsoni yemumba-yakura Mongoose CPU cores, seSamsung yakavhara tsika yayo CPU kupatsanurwa ekupedzisira 2019.
Pamberi pe graphical, iyo Exynos 990 yakarongedza Arm's Mali-G77 MP11 GPU. Saka CPU neGPU zvakaumbika sei kune iyo Snapdragon 865 chipset yakashandiswa muUS uye Korea Galaxy mafoni? Kwete chaizvo.
Kuyedzwa kwedu kwakaratidza kuti Exynos 990-inotora Galaxy S20 Plus yakasara kumashure kweiyo Snapdragon musiyano mune yakanakisa yega yega CPU neGPU benchmark. Zvichida 2019's Exynos 9820 yakapa zvirinani kuita imwechete-musimboti. Iwe haufanire kuona kupatsanurwa kweCPU sezvo mutsauko wacho usiri mukuru, asi imwe nyaya kana zvasvika pakuita kweGPU. Hazvishamise kuti shanduko huru dziri kuuya kuExynos GPUs.
Yese yakasara yechipset yaicheka zvine mutsindo zvakadaro, zvichiratidza kuti Samsung ichiri kugona kuburitsa maficha epamusoro-soro mune dzimwe nzvimbo. Tine bundg 5G modem inotsigira mmWave uye sub-6GHz zviyero (kubuda pa7.2Gbps) uye rutsigiro rweUFS 3.0 yekuchengetedza uye LPDDR5 RAM. Kune zvakare mbiri-musimboti NPU uye DSP kuendesa kusvika gumi nemashanu TOPS (trillion mashandiro pasekondi) yekuita, zvinoenderana neiyo Snapdragon 15.
Samsung's 2020 mureza mushandirapamwe zvakare akatsigira zvakajeka kukwirisa mitengo yekuzorodza kekutanga, ichipa 120Hz mitengo yekuvandudza paQHD + kana 60Hz pa4K. Iyo femu yaizoisa iyi rutsigiro mushandiso wakanaka neGPS S20 dzakateedzana uye Cherekedza 20 Ultra, neyaimbove inopa 120Hz kuFHD + nepo yekupedzisira ichipa 120Hz paQHD + resolution.
Iyo Exynos 990 yaive yakanaka ine simba kamera papuratifomu zvakare, ichipa 108MP imwechete kamera rutsigiro, 24.5MP + 24.5MP mbiri kamera rutsigiro, anosvika matanhatu emasaini maseru, uye kugona panguva imwe chete kugadzirisa data kubva kune matatu maseru. Isu takawana zvakare 8K / 30fps kurekodha zvakare, uye kambani yaizoisa iyi rutsigiro mushandiso wakanaka neyakajeka ye2020, ichishandisa senge nzira yakaputika yemhando kuburikidza neiyo 8K Vhidhiyo Snap sarudzo.
Nhare dzinozivikanwa: Samsung Galaxy S20 yakateedzana, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Note 20 akateedzana
2021: Exynos 2100
Chikwereti: Eric Zeman / Android Chiremera
Iwe unoregererwa nekufunga kuti 2021 igore rekumira reScams Exynos chikamu. Mushure mezvose, kambani yakazivisa kudyidzana neyemifananidzo colossus AMD kununura GPU-ine chinangwa-inotarisirwa mumatanho e2022. Ndiwo zvakare gore rekutanga risina tsika CPU cores, sezvo ikozvino ichivimba chete paArm tekinoroji.
Neraki, iyo 5nm Exynos 2100 inoita nharo yakasimba yekuve imwe yeakanakisa Samsung Exynos chipsets munhoroondo yazvino. Tine tri-cluster CPU yakada kufanana neanokwikwidza Snapdragon 888 SoC, iine ine simba Cortex-X1 CPU, matatu Cortex-A78 CPU cores, uye ina Cortex-A55 cores. Ikozve kune Mali-G78 MP14 GPU, iyo isingashandisi angangoita akawanda shader cores seKirin 9000's GPU (Mali-G78 MP24), asi ichiri kuvimbisa ingangoita 50% yekuwedzera kwekuwedzera pamusoro pegore rapfuura Exynos 990.
Izvi zvinorevei maererano nesimba rebhiza ipapo? Isu takafananidza iyo Exynos 2100-kutora Samsung Galaxy S21 Ultra ku Snapdragon 888 zvakasiyana, uye iri chokwadi mujaho wepedyo kupfuura wegore rapfuura. Kunyanya zvakanyanya, isu takati CPU inoshanda pakati pezvakasiyana izvi yaive "mutsipa-uye-mutsipa." Musiyano weSnapdragon uchiri kubuda mukukunda mukuyedza kweGPU, asi gapuro racho rakanga riri diki kwazvo kupfuura gore rapfuura. Sezvineiwo zvakakwana, isu takaonawo kuti iyo Exynos musiyano yakakwenya zvishoma nekukurumidza asi ikaunza kutsungirira kuri nani.
Samsung's 2021 chipset zvakare ine yakasanganiswa 5G modem kekutanga mune iyo mureza Exynos renji. Izvi zvinofanirwa kukonzeresa kuita kwakaringana zvichienzaniswa nema processor ane akasiyana modem Zvakadaro, urikutora mmWave uye sub-6GHz rutsigiro pano, kubuda pa7.35Gbps.
Iyo chipset nyowani yakatsikawo zvinhu kumusoro muchina nzvimbo yekufunda, ichibva kune mbiri-musimboti NPU mu2020 kune katatu-yakakosha dhizaini. Samsung inoti izvi zvinogonesa AI kuita mudunhu re26 TOPS.
Mamwe ese eExpynos 2100 spec sheet yakanaka kumusoro-tier ye2021, iine LPDDR5 RAM rutsigiro, rutsigiro rweUFS 3.1 yekuchengetedza, 144Hz yekuzorodza mwero paQHD +, 120Hz pa4K resolution, uye rutsigiro rweAV1 decoding. Iyo yekupedzisira inofanirwa kukonzeresa kwakakosha bandwidth kuchengetedza kana uchifambisa vhidhiyo kuburikidza nemasevhisi anotsigira AV1.
Chipset yeSamsung zvakare inoburitsa muchikamu chekamera, iine 200MP imwechete kamera rutsigiro, 32MP + 32MP mbiri kamera, anosvika matanhatu kamera sensors, uye 8K / 30fps vhidhiyo yekurekodha.
Nhare dzinozivikanwa: Samsung Galaxy S21 yakatevedzana
2022: Chii chekutarisira zvinotevera?
Gore rinotevera rinoratidzira nhambo nyowani yemhando munhoroondo yeSamsung Exynos chipsets, seyakasimba inoshandura kuenda kuma AMD GPUs eayo epurosesa eApple processor. AMD CEO Dr. Lisa Su kwakaratidza kuti iyi yekutanga GPU ichave yakavakirwa pane iyo firm's RDNA2 dhizaini uye ichatsigira ray kuteedzera uye kusiyanisa rate shading. MuChirungu chakachena, zvinoreva kuti tiri kutarisira chidimbu chakasiyana chesilicon.
Dr. Su akawedzera kuti Samsung yaizogovana rumwe ruzivo nezve chipset nyowani "gare gare gore rino." Uyezve, Samsung yakambosimbiswa to Android Authority kuti mutsivi weExpynos 2100 aizove nemifananidzo ye AMD. Saka zvinoita sekunge isu tinofanirwa kutarisira kuburitsa mukupera kwa2021 uye zvigadzirwa zvekutanga zvekutengesa zvine iyi chipset mu2022.
Samsung yakaendawo zvese-muArm CPUs gore rino, saka zvine musoro kuti iyo inotevera firipi yemuchadesi chipset ichaenderera mberi neichi chiitiko nekupa imwe Cortex-X2 musimboti, matatu Cortex-A710 cores, uye ina Cortex-A510 cores. Isu tinoshamisika kuti Arm's CPU cores ichaenderera mberi sei, kunyanya sezvo Qualcomm ichatanga yayo yekutanga processor inofambiswa neNuvia tech muna 2022 (kunyangwe pamalaptop). Chombo chichava nechimwe chinhu chakaenzana kumusoro kwayo ruoko mumakore anouya?
Chero nzira, 2022 iri kutaridzika sekutanga kwenguva nyowani yeva Samsung Exynos processor. Hatisi kutarisira mutambo-unoshandura mhedzisiro kubva kune yekutanga AMD-inopa simba Exynos chipset, asi ichaisa hwaro hwekuyedza mune ramangwana.
Samsung Galaxy Note 10 Lite Ongororo: Democratizing iyo S Pen chiitiko
Samsung Galaxy S20 + Ongororo: Iwo akajairwa anotakura mureza mureza
Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra Ongororo: Kune Vaya Ari Mberi kweCurve
Samsung Galaxy Tarisa 4 ongororo: Wachi yakavakirwa pane zvakavimbiswa
Snapdragon SoC inotungamira: Ese maQualcomm's smartphone processors akatsanangura!
Samsung Galaxy M31s Ongororo: Kugadzirisa fomu yakabudirira
Samsung Galaxy S11 kana S20 specs, zuva rekuburitsa, nhau uye runyerekupe
Ongorora: Samsung Galaxy Book Pro 360 15-inch inongonyara hukuru
Android 11 Yetsika ROM Rondedzero - Unofficially Gadziridza Yako Android Runhare!
Iyo Snapdragon Samsung Galaxy S22 Ultra iri nani kupfuura iyo Exynos
Filed Under: famba
Nzira yekugadzirisa sei Windows Gadziridza Error 80244019
Windows 10 Purogiramu inoramba ichikundikana nekanganiso 0x8007001f - 0x20006
Nzira Yekushandura Netflix Dhairire MaIri Windows 10
Troubleshoot Outlook "Haisi kushandiswa" Haigone Kutumira Email Error
Ndingaita sei kana kubvisa Alt Gr key pamusoro Windows 10 kiibhodhi
Nzira yekuisa sei Android APK APK pane Samsung Tizen OS Device
3 Nzira dzekuzarura PST File pasina Office Outlook In Windows 10
GADZISA: Windows Gadziridza chikanganiso 0x800f0986
Zvaungaita Kuti Uwanezve Mashoko Akabudiswa paNyoka
Yazvino Samsung Galaxy Cherechedzo makumi maviri inodonhedza ispec dump inoratidza zvakakosha maficha
Isa Android 7.0 Nougat ROM paGalaxy Core 2 SM-G355H
Mawebhusayithi ekuona Mafirimu Online - 10 + Best Websites Pasina SignUp / Downloading
Maitiro Eku Backup SMS Meseji pane Yako Android Smartphone
Nzira yekubvisa peji isina ruzivo pakagumo kwedhimwe reMicrosoft Word
Gadzirisa: Iyo Disiki Faira Yefa Yakakanganiswa Mukati Windows 10
Samsung Galaxy Z Fold 3 inogona kurongerwa muna Chikumi 2021, ine S Pen rutsigiro
Amazon amazon prime amazon prime video apuro Application software epic mitambo Galaxy Note 20 Galaxy S22 Plus Samsung Galaxy S22 Ultra Google Sheetsiti pamahedhifoni Huawei icloud Instagram chiriporipocho Rinozvikudza ip kero iPhone iPhone 12 iPhone 13 iphone 13 pro max macOS Microsoft Microsoft Edge Mobile app office 365 mataridzikiro Pixel 6 Samsung Galaxy Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 Samsung Galaxy Tab S8 smartphone speedtest kukurumidza bvunzo mapoka tiktok Twitter Vpn WhatsApp whatsapp webhu Windows 10 Windows 11 Shanduko Windows 11 Kuburitswa Windows 11 Update Windows Subsystem Ye Android Windows 11 Xiaomi